मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि सांसद ‘अपहरण’को प्रश्न उठ्यो ! | Nepal Ghatana
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि सांसद ‘अपहरण’को प्रश्न उठ्यो !
प्रकाशित : २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:२९
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिमलाकुमारी खत्रीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवास बुटवलमा आफुलाई बन्धक बनाइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी विमलाले ५ दिनसम्म आफुलाई बन्धक बनाइएको भन्दै भागेर माओबादी केन्द्रको सम्पर्कमा पुगेको बताउनुभएको छ । यसअघि माओवादी केन्द्रले पनि सांसद खत्री अपहरणमा परेको बताउँदै आएको थियो ।
यो घटनाले मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथी नै ठुलो प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपी एमालेले भने सांसद खत्री राजीखुसीले मुख्यमन्त्रीको निवासमा बसेको दाबी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी हुँदै गर्दा साउन १५ गते शुक्रबारबाट सांसद बिमला कुमारी खत्री सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो ।
परिवारलाई हवला दिदैं खत्री उपचारको लागि नेपालगञ्जमा रहेको र केही दिनमा पार्टीको सम्पर्कमा आउने समाचार पनि बाहिर आयो । त्यसको केही दिनमा खत्री नेकपा एमालेमा रहेको भन्दै प्रेस बिज्ञप्ती आयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्का नेताले सांसदको अपहरण गरेर जबरजस्ती विज्ञप्ती निकाल्न लगाएको आरोप लगाए ।
बुधबार माओवादी केन्द्रको सम्पर्कमा आएकी सांसद खत्रीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुलाई बन्धक बनाइएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । सांसद खत्रीले आफुलाई नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलमा ल्याएको बताउनुभयो ।
बुटवलमा ल्याएर आफुलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न दबाब दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । एमालेमा फर्किएँ भनेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइ साउन १९ गते विज्ञप्ति जारी गराएको पनि खत्रीले दाबी गर्नुभएको छ ।
सांसद खत्रीको विज्ञप्ती वाचन गर्दै माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी सचेतक तुलाराम घर्तीले उहाँ पहिले र अहिले पनि माओवादीमै रहेको बताउनुभयो ।
दाङबाट नेपालगञ्ज लैजाने भन्दै बुटवल ल्याएपछि पाँच दिनसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बन्धक बनाइएको विमलाले बताउनुभयो । साउन २० गते बुधबार सबै जना आराम गरिरहेको मौका छोपेर शौचालय जाने चप्पल लगाएर भागेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद खत्रीले एमाले प्रवेश गर्न दबाब आएपनि आफु माओबादी केन्द्र मै रहेको बताउनुभयो । यस घटनाले आफुलाई झन परिपक्क बनाएको उहाँको भनाइ छ । अपहरणको आरोप लागेका एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने विमला राजि खुसीले नै बुटवल आएको दाबी गर्नुभएको छ ।
यो घटनाबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छैन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथी अहिले ठुलो नैतिक संकट खडा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलले घटनाको तत्काल छानविन गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक संजालमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त नगरे सभामुखलाई नै ठेगान लगाउने एमालेको चेतावनी
शाही र वलीलाई कारवाही नगरेसम्म एमालेले संसद चल्न नदिने
समाजवादी क्रान्तिको विकासका लागि नयाँ विचार विकास गर्न लागिपरेका छौं : अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रिय
सत्तारुढ र प्रतिपक्षको ‘जुगाँको लडाईं’: कानून व्यवसायीलाई ओलीको यस्तो जवाफ राष्ट्रिय
नारायणी नदीमा एमालेलाई तिलाञ्जली दिइसके, झण्डा बाँदरले बोक्ने दिन आउने अध्यक्ष नेपालको दाबी राष्ट्रिय
जुरे पीडितको नाममा संकलित रकम ८ वर्ष हुँदा पनि सरकारी खातामै प्रदेश